Lelee nhazi UTM na Google Maps, na iji Ọ B !LA! ọzọ ahazi usoro - Geofumadas
Julaị, 2012 Cartografia, innovations, mbụ echiche
Ruo ugbu a, ọ na-adịkarị lee UTM na nhazi ala na Google Maps. Mana na-edebe datum nke Google kwadoro nke bụ WGS84.
Gịnị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ na Google Maps, nchịkọta nke Colombia na MAGNA-SIRGAS, WGS72 ma ọ bụ PSAD69?
A nhazi nke Spain na ETRF89, Madrid 1870 ma ọ bụ ọbụna nyocha 95?
Ma olee maka nhazi nke Mexico na GRS 1980 ma ọ bụ International 1924?
Couplebọchị ole na ole gara aga enwere usoro nke na-enye gị ohere ịme nke ahụ, ọ bụkwa PlexScape WebServices. Site na ndị enyi Greek ndị na-emepụta Plex.Earth, nke na-ejikọta data n'etiti Google Earth na AutoCAD, bụ nke na-eme ka a na-ese anwụrụ maka AutoCAD 2013 ugbu a nke gbanwere iwu nke egwuregwu.
Ma ọ bụ na ọrụ PlexScape a na-akwado ihe ọbụla karịa Nhazi usoro 3,000 na 400 Datums, dika Plex.Earth na akwado.
Ka anyị lee ule: Aga m agbalị ịkọwa nzọụkwụ site na nkwụsị n'ihi n'eziokwu na interface ahụ abụghị ihe omimi na nyocha mbụ:
Anọ m ugbu a na Bogotá na enwere m mmasị ịhụ ọdịiche nke nhazi n'etiti WGS84 na SIRGAS:
Ka e were ya na m gbara gburugburu Ngwa akụrụngwa, dị ka e gosiri na map:
Ọrụ PlexScape Web Services, nwere ọrụ atọ maka ugbu a: Otu nke bụ nsuso dị mfe iji mara nhazi nke otu isi (Nchịkọta Ndepụta), onye ọzọ ịchọta ihe na map ma bupu ha na km / txt (Mepee Digitizer) na nke ọzọ bụ nke anyị ga-eji ugbu a, akpọ Ndị na-eme nchọpụta.
1. Họrọ usoro nke mmalite
Maka nke a, anyị na-ahọrọ na taabụ aka ekpe, mba anyị nwere mmasị. N'okwu a, Colombia, na ozugbo ahọpụtara, anyị ga-egosi WGS84 dị ka Datum nke mmasị.
N'etiti taabụ / latitude tab na Easting / Norting enwere nhọrọ nhọrọ dị iche iche. Mmasị na obodo kpara ha akwụ n'ihi na ọ ga-abụ nzuzu ịchọ ha n'etiti ọtụtụ ndị sistemụ ahụ na-akwado.
2. Ebe isi mmalite
Iji mee nke a, inwe mpaghara nke masịrị anyị na map anyị, na-efegharị òké ahụ na akara ngosi dị ala ma họrọ «Weta akara ahụ na map«, Nke a ga-egosi anyị isi nke mmasị na eserese ngosi. Mgbe ahụ, anyị dọkpụrụ ya gaa kpọmkwem ebe anyị chọrọ ịchọta ya. Enwere ike ime otu ihe ahụ na taabụ elu, mana o yiri ka ọ bara uru ịme ya site na akara ngosi ahụ ma m ga-egosi ya n'ụzọ a n'oge mmega ahụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ihe nhazi nke ebe anyị chọtara ya, mgbe ahụ anyị agakwuru akara ngosi ọzọ wee họrọ «Nweta nhazi site na akara«, Nke a na anyị panel ga-egosipụta.
Ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ itinye otu nhazi, anyị wee dee ya na panel ma na-aga n'elu akara ngosi anyị họọrọ «Debe akara maka nhazi«, Nke a na isi okwu a ga-adị na nhazi a ga-abara anyị uru.
3. Lelee nhazi UTM
Iji mara nhazi UTM nke ebe a, anyị ga-egosi mpaghara ntụnye. Ọ bụrụ na anyị nwere obi abụọ ọ bụla, anyị nwere ike ịhọrọ otu n’ime ha, yana nhọrọ «Gosi ókèala»Mpaghara akara na acha anụnụ anụnụ na-egosi. Nnukwu enyemaka n'ihi na ka anyị cheta nke ahụ Colombia abughi nani dara na mpaghara 17 North, 18 North na 19 North kamakwa n'otu ma n'ebe ndịda ebe ọ bụ na Ecuador gafere mba ahụ na ihe dara na mpaghara isii. N'ihi ya, ha emegharịala usoro nke mpaghara ha nke na-eme ka ndụ ha ka njọ.
Na nke a, anyị ahọrọla UTM Zone 18 N na dịka a pụrụ isi kwuo ya, anyị na-ahụ na e nwere ebe anyị nọ.
3. Bugharịa nhazi site n’aka ekpe gaa n’aka nri
Ruo ugbu a, ihe anyị hụrụ bụ otu esi egosipụta nhazi UTM na Google Maps. Mana anyị nwere mmasị ịhụ otu nhazi ahụ na usoro nhazi ọzọ, maka okwu MAGNA-SIRGAS. Nke mbụ, anyị na-eji akụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egosi na otu ntụgharị ahụ sitere n'akụkụ aka ekpe gaa n'akụkụ aka nri. Emere nke a site na ịpị na ihe ga-amasị anyị bụ na akụkụ abụọ ahụ bụ otu.
Ugbu a iji rụọ ọrụ aka nri pointer, anyị na-eme otu ihe: Anyị na-efegharị òké ahụ na akara ngosi, ma họrọ «Weta akara ahụ na map«. Ọ bụrụ na ọ daa na ebe ọzọ, anyị na-enyocha ọnọdụ ahụ ọzọ wee gosipụta «Bugharịa akara na etiti map»Ma dakọtara mmekota«Debe akara maka nhazi".
Ihe mgbaàmà na ihe niile dị mma bụ na pointer na-acha anụnụ anụnụ ga-adị n'otu ebe pointer na-acha aja aja ma ọ bụrụ na usoro nhazi ahụ bụ otu na ha abụọ. O nwere ụfọdụ ọgbaghara, mana ọ na-arụ ọrụ.
4. Mara ebe nchekwa WGS84 di na SIRGAS
Maka nke a, anyị gbanwere site na WGS84 gaa SIRGAS n'akụkụ aka nri. Ma anyị hover na akara ngosi na-ekwu «Nweta nhazi site na akara«, Ya mere, anyị na-enweta nhazi nke isi na anyị nwere ma na nke ọzọ usoro. Rịba ama na na lat / lon nhazi ahụ bụ otu ihe ahụ, ọ bụkwa na SIRGAS dabere na WGS84.
Mana ọ bụrụ na anyị lelee ihe na-eme na nkeji UTM, nhazi na X dị iche na 3 centimeters na nhazi na Y ọzọ centimita. Nke a bụ ihe kpatara na enwere ike ịsị na sistemụ abụọ ahụ hara nhata. Ka anyị na-agagharị ọdịiche a na-agbanwe na millimeters. M dokwuo anya na nke a dị ka oke nke PlexScape Web Services hazie, ihe ọ bụla dị iche ga-akọrịrị n'ihi na ọ mere m oge ole na ole gara aga.
5. Mara nhazi na PSAD
Anyị nwere ike ịhọrọ usoro ọ bụla ọzọ, ma rịọ ka enyeghachi ya ahazi ya na «Nweta nhazi site na akara«. Ihe pointer ekwesịghị ịkwaga, ebe anyị nọ n'otu oge, ihe ọ na-alọghachi bụ nhazi na sistemụ ọzọ. Maka ikpe, na PSAD 1956 otu isi a nwere nhazi X = 604210.66 Y = 512981.6.
Chegodi na ihe anyi choro ihu bu otu ihe nhazi n’usoro abuo (abughi otu isi ihe), mgbe ahu anyi detuo nhazi ahu site n’aka ekpe rue akuku aka nri ya wee buruzieDebe akara maka nhazi»Ma n’ebe ahụ anyị nwere ya. Otu nhazi dị n'okpuru, na ogwe abụọ ahụ, mana isi na-acha anụnụ anụnụ dara 228 mita n'akụkụ ọdịda anyanwụ na mita 370 na ndịda.
Ihe ọrụ PlexScape Web Services na-adọrọ mmasị. Na uche m. Anotherbọchị ọzọ anyị ga-ekwu maka ọrụ ọzọ ha, ụfọdụ n'ime ha na-akwụ ụgwọ, gụnyere otu ntụgharị a site na faịlụ nwere ọtụtụ isi.
Gaa na ibe PlexScape Web Services
Mụtakwuo maka UTM Coordinates
Previous Post«Previous Debe mpaghara cross-sections na CivilCAD
Next Post UTM ahazi usoro egosipụta na Google MapsNext »